Ceelgows.com » Puntland oo ku dhawaaqday in ay bilaabatay diiwaan galinta xisbiyadda Siyaasadda
Puntland oo ku dhawaaqday in ay bilaabatay diiwaan galinta xisbiyadda Siyaasadda Sep 12, 2012 - ujawaab	Dowladda Puntland ayaa horay waxaa ay u magacawday gudi kumeel gaar ah kaas oo wadaya hwlaha doorashooyinka Puntland, oo haatan bilow ah.
Gudiga doorashooyinka ayaa waxaa ay ku dhawaaqeen in laga bilaabo 11/09/2012, ay bilaabatay diiwaan galinta Ururo siyaasadeed, kuwaas oo qayb ka noqonaya hogaan ummadda Puntland, ee nidaamka axsaabta badan loogu guurayo.
Hadabba gudiga Doorashooyinka P/land ayaa waxaa uu ku dhawaaqay qodobadaan hoos ku xusan.
j. magacyada 2 qof oo xirriiriyaal ah iyo Cinwaannadooda ( Telephone iyo Email)
Gudiga ayaa qabanaya araajida Doorashooyinka.
Tags: puntland somalia stae « PreviousGaalkacyo: Dabaal dagyo kasoconaya Gaalkacyo iyo madaxweynaha lagusoo dhaweeyey.	Next »Gudoomiyaha dhalinyaradda gobolka Mudug ee dalka Kenya oo Radio Galkaio lahaglay (Dhagayso)	Leave a Reply